Bandhig sawireed lagu qabtay Minneapolis
Bandhig sawireed lagu qabtay Minneapolis	Last Updated on Friday, 14 December 2012 15:28	Friday, 14 December 2012 15:26	Waxaa magaalada Minneapolis lagu qabtay bandhig sawireed. Sawirada waxaa soo bandhigay oo qaadayna sawir-qaade Maxamed Bare oo degan gobolka Minnesota.
Sawirada intooda badan waxaa laga soo qaaday ganacsiyada ay Soomaalida ku leeyihiin magaalada Minneapolis. Sawirada darbiga ku dheganaa ee la daawanayay waxaa wehliyay bug sawiro ah oo aad u qurux badan.
Dad badan ayaa imaaday bandhig sawireedka, intooda badan waxay ahaayeen Mareykan. Joornaalka ugu weyn gobolka Minnesota ee Star Tribune ayaa laga sheegay bandhigan laguna wareystay Maxamed Bare.
Maxamed oo aan wareysi gaaban la yeeshay ayaa ii sheegay sababta uu u sameeyay bandhigan. Wuxuu tilmaamay in uu rabo in uu Mareykanka tuso in Soomaalida ay yihiin dad ganacsiga ku fiican oo shaqeysta. Dhalinyarada Soomaalidana in ay arkaan sawiradan 50 sano 60 sano ka dib marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen dadkoodii ugu soo horeeyay Minnesota.
Bandhigan waa kii labaad ee uu Maxamed qabto.